शिवराज वडा नं.४ द्धारा किसानलाई कृषि सामाग्री वितरण – मोफसल खबर
Home Featured, जिल्ला समाचार शिवराज वडा नं.४ द्धारा किसानलाई कृषि सामाग्री वितरण
शिवराज वडा नं.४ द्धारा किसानलाई कृषि सामाग्री वितरण
Posted on २०७८, १५ असार मंगलवार १७:३५
कपिलवस्तु, असार १५
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नं. ४ का किसानहरुलाई वडा द्धारा कृषि सामाग्री वितरण गरिएको छ । आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ को वडाको योजना अनुसार छनौटामा परेका किसानहरुलाई विभिन्न कृषी उपकरणहरु वडाले वितरण गरेको हो ।
कृषकहरुलाई कृषि सामाग्री वितरण गर्दै वडा अध्यक्ष सफिक अहमद मुसलमानले वडाका सबै नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध भएकोले वडाले कृषिलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । वडा स्तरिय बजेटबाट किसानको ४० प्रतिशत सहभागितामा ३६ जना किसानलाई मोटर ,१३ जना किसानलाई चारा काट्ने मेशिन वितरण गरिएको अध्यक्ष मुसलमानले बताउनु भयो ।
यस्तौ शुद्ध पिउने पानीका लागि १४ जना किसानलाई २ लाखको लागतमा निशुल्क हेण्डपम्प,१ सय ५० फुट पाइप,६ नं. मठ्ठा, जिआइपाइप र १ थान फिल्टर जाली वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष मुसलमानले बतानु भयो । वडाले प्रदान गरेको कृषि सामाग्रीले वडाका किसानहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न र व्यवसायिक कृषि गर्न थप हौसला प्राप्त हुने उहाँले बताउनु भयो । कृषिमा आधारित वडा भएकोले आ.ब. ०७८÷०७९ को वडा स्तरिय योजनामा पनि कृषिलाई विशेष जोड दिएको उहाँले बताउनु भयो ।
विजयनगर गाउँपालिकाको नदि�...
दिपक के.सी.कपिलवस्तु जेठ १३ कपिलवस्तु�
यसपालिको मनसुन जोखिमपूर्�...
काठमाडौं – मनसुन भित्रि नै लागेको ने
माओवादीले १४ जनप्रतिनिधि�...
काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रले नि
कपिलवस्तुमा निषेधाज्ञा थ�...
कपिलवस्तु – कपिलवस्तुमा निषेधाज्ञा
कालीगण्डकी डाइभर्सन परिय�...
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कालीगण्ड�
विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल �...
काठमाण्डाै – नेपाल दूरसञ्चार प्राध�